🏕I-Luxury Glamping - I-Chalet, i-Blue Wren ne-Lyrebird🏕 - I-Airbnb
🏕I-Luxury Glamping - I-Chalet, i-Blue Wren ne-Lyrebird🏕
Porepunkah, Victoria, i-Australia
Ikamelo e-itende ibungazwe ngu-Porepunkah Bridge
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Porepunkah Bridge izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 9.
Siyakwamukela kwelinye lamatende ethu ama-3 kanokusho - i-Chalet, i-Blue Wren ne-Lyrebird. Lawa matende angaphambili komfula edolobheni elihle lasePorepunkah, amakhilomitha angu-5 ukusuka eBright.
Ifakwe izinto zokushisisa nokupholisa ukuze uhlale unethezekile unyaka wonke, umbhede we-Queen Size, ikhishi elinomshini wekhofi, ama-cushion asakazayo, itafula nezihlalo.
Itende libekwe endaweni enhle necezile yeHoliday Park yethu enompheme wayo oyimfihlo ukuze ujabulele ukuhlala ngaphandle.
Siyipaki yeholide etholakala ezweni eliphakeme lase-Victorian - phansi kwe-Mount Buffalo, ngasosebeni lomfula i-Oven. 5km ukusuka kuBright.
Indawo yethu izungezwe imvelo enezindawo ezimangalisayo, okuyenza ibe indawo enhle kakhulu yokuba nekhefu elifanele - ungakhululeka futhi ubalekele kukho konke, uhlole indawo futhi ujabulele yonke imisebenzi okunikezwayo.
Ukuhlala kwakho nathi kungase kube okuphumuzayo noma okuthakazelisayo ngendlela okhetha ngayo.
I-Chalet iyitende elicwebezelayo elimiswe ngokukhethekile labantu abangu-2 futhi senze isiqiniseko sokuthi uzokhululeka kungakhathaliseki ukuthi uvakashela siphi isikhathi sonyaka.
Setha ngedekhi yokhuni ehlala njalo, uzobe ucwebezela ngesitayela! Jabulela ukuhlala ngaphandle nezihlalo zethu ze-teak ezinhle nezinethezekile, ubukele umfula - sinezindawo zokucisha umlilo esingaziqasha uma ungathanda ukubasa umlilo ebusuku.
Unayo futhi i-hammock yakho!
Lawa matende kanokusho e-Glamping avulekile ngaphakathi futhi afaka okulandelayo:
* I-heater kawoyela kanye nengubo kagesi yezinyanga ezibandayo
* I-airconditioner ephathekayo kanye ne-oscillating fan yezinyanga ezifudumele.
*UMBEDI WEQUEEN SIZE ngeKing Size doona kanye nezingubo zokulala.
* Hlaza ama-cushions ukuze uziphumulele
* Amathawula nezinto zokugeza
* I-KITCHENETTE enefriji enkulu yebha, i-microwave, iketela, i-toaster nomshini we-coffee pod.
* Amapuleti, izinto zokusika, izingilazi, izingilazi zewayini nojeke wamanzi
* Sinikeza ikhofi, ubisi olusha kanye netiye
* ITHEBULA NEZIHLALO uma udinga ukuhlala ngaphakathi. Ungakwazi futhi ukusebenza nge-laptop yakho kusuka lapha.... uma udinga ukuza nomsebenzi.
Sicela usazise uma ungathanda ukukhiya ukuze uthole ukuphepha futhi sizokunikeza ilokhi uma uyicela.
* Sibekele eceleni izindawo zokugezela ezizinikele eziyimfihlo endaweni yekhempu futhi ebekelwe kuphela izivakashi zethu ezicwebileyo - lokhu kusho ukuthi uzokwabelana ngezindlu zangasese nezishawa nezinye izihambeli ezimbalwa kuphela epaki.
* Uma ungena sizokunikeza ukufinyelela kulezi zikhungo.
UKUPAKA - sinokuningi!
*Paka imoto yakho eduze kwe-The Chalet, kunendawo eyanele yemoto noma i-Campervan - okwenza lokhu kube inketho ekahle uma ungathanda ukuthatha ikhefu empilweni emgwaqeni.
IZINDABA ZE-HOLIDAY PARK
* Ipaki yethu yamaholide inikezela ngezinsiza eziningi ezigcinwe kahle nezihlomele.
* Ikhishi lekamu - lazo zonke izidingo zakho zokupheka.
* Izindlu zangasese - igumbi lokugezela elihlukile labo bonke abakhazimulayo bethu namanye amagumbi okugeza kulo lonke elaseHoliday Park.
* Ilondolo - Imishini yokuwasha esetshenziswa uhlamvu lwemali nokomisa kuyatholakala ngo-$4 ngokuwasha ngakunye kanye no-$2 imizuzu engu-20 kumshini wokomisa, sinoshintsho uma uludinga.
* I-Swimming pool - ichibi elikhulu elihle nendawo ezinikele enama-recliner izinyanga ezifudumele!
YENZA UKUHLALA KWAKHO KAKHULU KAKHULU
Sinezinhlobonhlobo zokwengeziwe ongaziqasha noma uzithenge ukuze wenze ukuhlala kwakho kujabulise nakakhulu.
Uma ungathanda ukuhlela noma ukubuza nganoma yikuphi okulandelayo ngaphambi kokungena, sicela usazise ngokuthumela umlayezo futhi sizokunikeza amanani entengo.
Kungenjalo uma usufikile, woza uzosibona ereception.
* FIRE PIT - qasha umgodi womlilo futhi ujabulele ebusuku ngaphansi kwezinkanyezi.
* I-GOURMET HAMPER - zimoshe ngeyodwa yama-gourmet hampers, ilungele ukuzithokozisa edekhini ephambi komfula, noma uyikhiphe ndawana thize futhi ube nepikiniki - sizokutshela ukuthi akuphi izindawo ezihamba phambili.
* MOUNTAIN BIKE HIRE - qasha elinye lamabhayisikili ethu futhi uhlole imizila yesitimela eqala ngaphandle kweHoliday Park
Uma uthanda i-glamping, kungani ungabelani ngothando futhi uthengele umuntu omthandayo ivawusha?
Sazise ukuthi ungathanda ukumosha othandekayo futhi singakuhlelela okuthile.
ubusuku obungu-7 e- Porepunkah
Uza ukuzohlala endaweni emangalisayo yase-Australia!
I-Porepunkah iyidolobha elincane lezwe lapho uzothola khona i-Porepunkah Pub, i-Rail Trail Cafe kanye ne-Punkah Pantry yamaphaya enziwe ekhaya namaroli amasoseji kanye nemikhiqizo yasendaweni, ubhiya, iwayini ne-cider! Ungakwazi nokuma ukuze uthole ikhofi nokudla.
Ukuhamba ngemizuzu eyi-10 idolobha elikhulu laseBright, uzothola i-Woolworths, isitolo samabhodlela, igalaji likaphethiloli, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, amabhayisikili kanye nokuqashwa / izitolo zokushushuluza.
Vakashela i-Bright Brewery bese uzama obhiya bendawo - indawo edumile yabantu bendawo kanye nezivakashi.
Uma uthanda igalofu elincane kunenkundla yezwe enhle ongadlala kuyo umzuliswano e-Bright Golf Club.
Ufuna uhambo oluthile? I-Bright Adventure Company inikezela nge-abseiling, ukugibela amatshe, i-kayaking, ukugoba umfula ongaphansi komhlaba kanye nokuhamba ngebhayisikili.
Uma uthanda kakhulu ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni futhi uletha ibhayisikili lakho noma uqasha kwa-Bright - sinamathrekhi amangalisayo; kukhona iMystic Park eBright, Big Hill Mountain Bike Park eMt Beauty naseFalls Creek Alpine Resort - zihlole ku-Trail Forks App noma usibone ukuze uthole izikhombisi-ndlela.
Empeleni emnyango wethu kune-Mount Buffalo National Park, egcwele amathrekhi ohambo nokuqwala izintaba, ukubukwa okumangalisayo kwezwe lethu eliphakeme kanye nezwe elimangalisayo. Kufanele uvakashele lapho uhlala lapha!
Khuluma nathi futhi sizokutshela ukuthi izindawo ezingcono kakhulu ziphi.
Hlola i-Billy Button Wines kanye ne-Feathertop Winery - izindawo zethu zewayini eziseduze.
Ibungazwe ngu-Porepunkah Bridge
Sihlala eHoliday Park ngakho sihlala sintanta nxazonke uma usidinga, ungasithola nasereception. Uma usungenile, sizokushiya ukuze ujabulele ukuhlala kwakho.
Uma ungena, woza endaweni yokwamukela izivakashi ukuze uthole indawo yesayithi lakho kanye nekhodi yesango le-boom. Uma ungena ngemva kwamahora sizokuthinta kusengaphambili ukuze sikunikeze imiyalelo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Porepunkah namaphethelo